कसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्दैन ? जानि राखौ – डा. नुतन शर्मा | No.1 Nepali News
Home विचार/ब्लग कसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्दैन ? जानि राखौ – डा. नुतन शर्मा
५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २३:३२
यस्तै प्राचिन समयमा पनि गर्भवती भएनभएको टेस्ट गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा गर्भवती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो । यस्तै अर्को तरिका बाट पनि गर्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।यस्तै प्राचिन समयमा पनि गर्भवती भएनभएको टेस्ट गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा गर्भवती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो । यस्तै अर्को तरिका बाट पनि गर्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।
Previous articleनौ वर्ष भयो श्रीमान विदेशबाट नआएको, यौ’न चाहना सबैलाई हुन्छ त्यसैले
Next articleअनुहारको दाग हटाउनको लागी प्रयोग गर्नुस् यस्ता घरेलु उपाए,जसले तपाईको दागलाई १० दिनमै निको गर्छ
nabin - ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २३:३२ 0
पछिल्ला दिनहरूमा इन्टरनेटमा एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ ।सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अपलोड भएको सो भिडियोले सबैको ध्यान तानेको हो । भिडियोमा प्रेमी–प्रेमीकाबीचको प्रेमबारे बताइएको...